काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम पछिल्लो केही दिनयता दिनहुँजसो घट्दै गएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालका अनुसार शुक्रबार बिहान काठमाडौं उपत्यकामा यस वर्षकै सबैभन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ।
शुक्रबार बिहान उपत्यकाको न्युनतम तापक्रम सात डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। बिहीबार न्युनतम तापक्रम ७ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। बुधबार ८ दशमलब ७ डिग्री सेल्सियस थियो। दिनहुँ तापक्रम घट्दै जाँदा चिसो बढेको महसुस भइरहेको छ।
देशको पश्चिमी भेगको मौसममा केही दिनदेखि असर पारिरहेको पश्चिमी वायुको प्रभाव शुक्रबार बेलुकीदेखि कमजोर हुँदै जाने महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसोपख पश्चिम पहाडका एक-दुई स्थानमा हल्का पानी पर्ने मौसमविद अर्यालले बताए।
पश्चिमी भेगका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपातको पनि सम्भावना छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने भएकाले शनिबारदेखि भने पश्चिमी भेगको मौसम सफा हुने सम्भावना रहेको अर्यालले बताए। यीबाहेक देशका अन्य स्थानको मौसम भने सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ।
भक्तपुरका भग्नावशेष हटाउनै कठिनाइ, चौतर्फी बाटो बन्द
जेठ २९। भक्तपुर, भूकम्पले घर भत्काएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि भक्तपुरका बासिन्दालाई भग्नावशेष हटाउन निकै […]
राष्ट्रपति र छोरीहरुका जुत्ता बोक्न सैनिक प्रयोग
काठमाडौं ७ कात्तिक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार सप्तरीको सखडास्थित प्रसिद्ध छिन्नमस्ता भगवती […]
पार्टी एकता सरेको हो कि टरेको ? प्रचण्ड र भारतीय राजदूतहरूको रहस्यमय बैठक
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण कहिले होला ? यसबारे नेपाली जनता बिलखबन्दनमा […]
शाहरुखकी श्रीमति भन्छिन्, ‘ शाहरुखको परिचयले पुग्दैन’
एजेन्सी, बलिउड अभिनेता शाहरुख खानकी श्रीमती गौरी खान एउटा अन्तर्वार्ताले चर्चामा आएकी छिन् । त्यसो त बलिउड […]